Shillong Guwahati Vacation Tour | Dana + 91-993.702.7574 Kutarisa
Kana iwe uchida chimwe chinhu chakazorodza zvakasiyana, Shillong Guwahati Vacation Tour ichava iwe kuenda-kuenda kune vhiki ino. Shillong, guta guru reMeghalaya rinonzi rakakodzera se "Scotland yeSouth." iri pakati pehombekombe refu mukati meKasi Hills, Shillong inoshamiswa nezvishamiso zvechisikigo, masango emusango, kuputika kwemvura uye makomo marefu. Shillong Guwahati Vacation Tour inoronga nguva yako yezororo. Iyo inozivikanwawo nemigodhi yayo yemari inoshandiswa iyo inoita kuti ive imwe yenyika dzine mineral-rich in India. Uya ugoongorora guta rine zvinyorwa zvemashoko kuzotaura. Shillong Guwahati Vacation Tour ichakutorawo ku Guwahati, guta guru mu Assam. Saridza nzvimbo yacho, inakidzwa nemamiriro okunze, uye ongorora zvishamiso. Iwe uchange uine nzvimbo dzakasiyana-siyana dzekushanyira ku Guwahati. Shillong Guwahati Vacation Tour inotarisira rwendo rwako rwose pasina dambudziko. Uyezve, iwe uchashanyira nzvimbo yakanyanyisa kudenga muIndia, Cherrapunji. Cherrapunji inopa panoramic maonero emakomo akadzika, makomo makuru uye mipata ine mvura inofadza. Tine Shillong Guwahati Vacation Tour Package, unogona kuona zvose zviripo uye kunaka kwezvakasikwa. Shillong Guwahati Vacation Tour ichakupa mukana wekutsvaga nzvimbo dzisina kufanirwa dzenyika ino. Pasi apa ndiyo nzira, iyo ichakupa pfungwa shomanana yekushanya uye iwe unogona kugadzirira kuti uende rwendo urwu runotyisa mberi.
03 Nights Programme | Mutambo Wokushanyira: 023
Garai uye mukwazisa nemumiririri wedu munhandare yendege & kutumira kuShillong, inonzi 'Scotland yeSouth'. Inroute unogona kushanyira Umium Lake, nzvimbo yakakwirira yepacc lake negomo re sylvan. Paunosvika kuShillong, tarisa kuhotera yako. Manheru anoshanyira misika muMall, kudzokera kuhotera. Usiku huno huri pahotera.
ZUVA 03: SHILLONG - GUWAHATI (100 KMS / 03 HOURS)
Mushure mekudya kwekudya kwekudya ku Guwahati. Uya uye uone muhotera. Manheru anoshanyira 'Kalakshetra', nzvimbo iyo nhoroondo yeAsamese netsika inoratidzwa kuburikidza neChiedza uye inoratidzira. Dzokera kune hotera. Kudya uye usiku humwe huri pahotera.
ZUVA 04: GUWAHATI
Mushure mekudya kwekudya chamangwanani shanyirai Kamakhya Temple Tumira kuGuwahati hoyo yerwendo.